Ajụjụ ọnụ nke Koray Tuğberk Gübur na Holistic SEO - Ne gerekir?
Ajuju ajuju banyere SEO, Holistic na Semantic SEO
Ajụjụ ọnụ nke Koray Tuğberk Gübür, onye guzobere holisticseo.digital
Koray Bey Bütünsel SEO’da gerçekten tanıdığım en bilgili ve başarılı kişi. Kurduğu Holistic SEO & DijitalụA na-enye ozi dị egwu na saịtị ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na --ekere usoro mmepe nke ọrụ ọ na - arụ na LinkedIn. N'ezie ọkwa nke ihe ịga nke ọma na saịtị ndị ahụ na-aga n'ihu dị ịtụnanya. A kpọrọ ya ikwu okwu n'ọtụtụ ebe, ọ na-anata arịrịọ ka ọ rụọ ọrụ site na ọtụtụ ndị otu si mba ofesi na n'ime mba ahụ. N'ikwu eziokwu, ọ baghị uru ịhapụ ihe ị na-eme. Ọ bụ ya mere ị ga - eji gbaso Maazị Koray na LinkedIn.
site na oru ha
Koray Tuğberk Gübur adịghị atụ egwu igbu oge na ọmụmụ ihe dị iche. Ọ bụ ya mere o ji nwee ihe ịga nke ọma. Ọ nwere ọtụtụ ọrụaka akwụkwọ na holisticseo.digital. Ọ bụrụ na ị dịla njikere inye oge gị, dị njikere ịnata mmụta banyere ọtụtụ okwu.
33bọchị iri atọ na atọ na aha ngalaba ọhụụ ọhụrụ.
#SEO ekwesịghị ịdị nwayọ nwayọ. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-amụ ma na-etinye nwayọ. Ọ bụ ya mere m ji eche na ịhapụ SEO Consulting mgbe afọ 2 gachara.
Mara: Saịtị a nwekwara mgbanwe siri ike SEO.
Ajụjụ ọnụ anyị
N'ụzọ doro anya, mmeghe kasịnụ emere na SEO na mba anyị anaghị etinye uche na SEO. Ọfọn, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ndị na-arụ ọrụ SEO;
Ihe anyị na-ekwu tupu anyị ajụwa ajụjụ
Kedu ihe ị chere kachasị njọ emejọ SEO?
Ihe ndị dị n'azụ SEO Industry na Turkey na-agbada n'azụ ụwa na-ekewa ụzọ atọ dị mkpa. Ọ bụ ezie na otu n'ime ha bụ atụmanya na ikike ọpụrụiche maka ndị ahịa, isi ihe abụọ ndị ọzọ bụ na ndị nọ na SEO Industry nwere oge na-esiri ha ike ịpụ na igbe ma ọ bụ na ọ bụghị ma ọlị, ha anaghị elekwasị anya na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma na ha rụọ ọrụ na ịhụ ọrụ ha n'anya n'eziokwu, dị ka "ịme aha na ịhụ ego n'anya".
Ihe ndị ahịa nwere na atụmanya ndị ahịa, na okwu ndị ọzọ, profaịlụ ndị ahịa, nke bụ nke mbụ n'ime ihe ndị hapụrụ Turkish SEO Industry Industry, ka a kọwara n'okpuru.
Ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị ahịa bụ ndị na-amaghị nke ọma na usoro SEO dị mkpa.
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa anaghị enwe ndidi iji chere maka uru SEO dabere na echiche nke Data Science, Ngosiputa data, uru dị elu (uru dị ntakịrị - mmetụta inremental).
Akụkụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa anaghị amata echiche dịka ụkpụrụ na-ejighị n'aka, Mkpebi-Osisi, Nhazi Asụsụ Nhazi, Njikọ ọnụ na Njikọ Nitem (Ihe osise Weebụ). N'oge a, ekwesịrị m ichetara gị na a na-ejikwa echiche ndị a eme ihe n'ezie na ndụ mgbe ị na-eme mkpebi, mmụta, mgbanwe ma ọ bụ echiche na-aga n'ihu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nsogbu ahụ na-akpali ọnọdụ ndị ọzọ.
Akụkụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa na-eme ka SEO dị mfe. Ha dị nnọọ anya site na ụdị Nchọgharị Nchọgharị.
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa enweghị ego zuru ezu maka ihe ọ bụla achọrọ SEO.
Ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị ahịa anaghị ekele uru ọ bara ime ka nzukọ dị mkpụmkpụ ma kwurịta okwu.
Akụkụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa amaghị maka oge (karịrị uche).
Ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa na-echefu oke na akpachapụghị anya ịbanye na ngalaba nke SEO, nke chọrọ atụmatụ dị elu na itinye onwe ya na ya.
Akụkụ dị ịrịba ama nke ndị ahịa anaghị atụkwasị SEO obi ha na-arụ ọrụ, ha na-ajụ ha ajụjụ ma na-eme ka ọrụ ahụ sie ike karị.
Akụkụ dị mkpa nke ndị ahịa anaghị ebute ọrụ na ihe ndị metụtara SEO metụtara.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị ga-arụ ọrụ na SEO ngalaba na Turkey kwesịrị ịhọrọ ndị ahịa ha nke ọma. Ihe ndị a dị n'elu nwere naanị nsonaazụ, ọ bụghị ihe kpatara ya. Dịka ọmụmaatụ, isi ihe kpatara edemede nke 9 metụtara "ịhụnanya ndị ọkachamara SEO maka aha na ego", nke bụ otu n'ime isi ihe kpatara Turkish SEO Processor (Industry) ka ọ ghara ịmalite. Yabụ, ọnọdụ nke ndị ọrụ SEO bụkwa maka ebumnuche niile nke ndị ọkachamara SEO, yana mmetụta okirikiri.
Ihe nke abuo bu nke kachasi ukwuu na nke kachasi. Goingpụghị igbe ahụ, na-amaghị echiche ma ọ bụ usoro ndị ọzọ karịa mmemme ọdịnala na nke eji, na-anwa, enweghị ike ime ka onye ahịa kwali ịnwale ya, ịghara itinye ihe egwu ma ọ bụ na enweghị mmetụta na ọ dị mkpa ịmụ, mara na ịghọta. N'okpuru ebe a bụ isi ihe kpatara mmejọ nke Turkish SEOs na-emekarị, ịghara ịgabiga ihe ọdịnala ma were ya dị ka ihe dị mkpa, na ịghara ịme ajụjụ A / B (ule).
Enweghi ikike nke SEO Agencies na ngalaba.
Ndị ahịa na-achọ nsonaazụ ozugbo, na-enweghị ndidi maka usoro "ịjụ ajụjụ" na "nyocha"
Alọ ọrụ SEO dị anya site na usoro echiche na ọdịnala sayensị.
Onu ogugu ndi ahia adighi ezuru iji mee nnwale.
Enweghị ike ịgbaso mmelite kachasị ọhụrụ (nke oge a) na aha SEO.
Ndị a bụ mmejọ kachasị njọ emere na Turkish SEO Processor.
Anyị agụọla ụfọdụ ederede gị. Otu akụkụ ya maka ugbu a ... Maka na ọbụlagodi otu ederede gị jupụtara n'ọtụtụ ozi. Anyị na-atụkwa anya ịgụ ha niile. Enwere ọrụ ndị na-ahapụ ọtụtụ usoro mmepe SEO amaara ama dịka atụmatụ enyi na onye ọrụ, ọsọ ọsọ saịtị, ma nweta ndị ọbịa na-enweghị atụ naanị na Semantic SEO.
Gendị a mana amachaghị, ihe kwesịrị ịrịba ama SEO ha nwere usoro?
Ebe izizi ebe akpọrọ aha Semantic, ya bụ, Contextual Search Engine (Deverge) Attunement, bụ nke Sergey Brin. Ozi mmịpụta si nchekwa data Ọ bụ patent akpọrọ mepụtara. Ihe mepụtara metụtara ya bụ afọ 1999. Yabụ, usoro niile na-arụ ọrụ mana amachaghị nke nwere ike itinye na Nchọgharị Nchọgharị Google dị ọzọ site na usoro Google na usoro mepụtara. Otu n'ime ha bụ Njikọ-Njikọ, nke ọzọ bụ Ntinye. Ọzọ bụ usoro a na-akpọ Barnacle SEO, nke a ga-atụgharị n'asụsụ Turkish dị ka "SEO gburugburu ma ọ bụ SEO gburugburu". Methodzọ ọzọ bụ usoro akpọrọ "Sound gburugburu". Methodzọ ọzọ bụ imepụta "Nchọpụta Ọchịchọ". Amaara m na ndị ọkachamara SEO na-atụle ngbanwe na nsonaazụ ogo yana usoro ndị gụnyere "kpọtụrụ", ma ọ bụ mgbanwe na usoro "Nkwenye" ​​na "mkpa" maka eserese ihe ọmụma Google N'otu aka ahụ, e nwere ụzọ dị iche iche na-esi mepụta ọdịnaya kpamkpam site na 0 na ebumpụta ụwa, "synonyms" na "okwu derivation" na "query map", nke kachasị mma itinye echiche nke ọdịnaya ahụ. A na - ekekọrịta usoro ndị a mgbe ụfọdụ na nnwale SEO A / B pụrụ iche na otu ndị otu nlele.
Enwere ọnọdụ ndị yiri ya ma ọ bụrụ na njikọ post-njikọ ma ọ bụ njikọ azụlinks, mana ọ gaghị ekwe omume ịkọwa n'oge a.
Kedụ ihe anyị nwere ike ime iji hụ na anyị nwere ọkwa maka isi okwu ụfọdụ?
Google na-ekwu na o nwere ihe karịrị 200 Nrịba Ama na ọkwa ya gara aga. Na 2020, o kwuputara nọmba a dika "kariri 2000", ya bu, kariri 2000. Dịka, ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ịsị na enwere ike ịgbaso usoro 2000. Methodszọ ị ga - agbaso ga - adị iche dịka ụdị ajụjụ a dị na “Query Map” nke ya, Ngalaba Ajụjụ. Otú ọ dị, ugboro ole mmelite nke ibe weebụ dị mkpa nke mpaghara netwọk ndị na-asọmpi (ebe nrụọrụ weebụ asọmpi), otu esi emelite ha, ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ, nha nke arịrịọ ahụ, njikwa nke nzọ ndị ọzọ dị mkpa nke kachasị mma. onye na-asọ mpi na aha ngalaba, arịrịọ sitere na Search Search na faịlụ ndekọ, igwe nchọ "nchọ" Ọ dị mkpa iji mepụta oge "na njikwa oge" ndenye "," na-aga n'ihu ", ya bụ, inyocha mgbanwe na akpaaka zuru-ezu data, iji mee nnwale Ahụmịhe Onye ọrụ, iji rụọ "web-graph", ya bụ, nyocha ndị metụtara njikọ, ka ibe weebụ wee mezuo nzube ya nke ọma. Me ihe ndị a niile na-aga n'ihu na-achọ nnukwu ọrụ ọrụ, yabụ Ihe Ọmụma Software bụ uru dị ukwuu maka ọkachamara SEO.
Kedu ihe anyị ga - eme iji dobe mmekọrịta anyị na Google ma mee ka ọ mata na anyị bụ saịtị dị mma?
Google agunyeghi mkpokọta weebụ, kama ihe ntanetị (ihe ntanetị) maka ịhazi ogo na ajụjụ ụfọdụ na isiokwu. Mkpokọta ahụ nwere naanị ngalaba aha na sava n'azụ ya. Ihe ntanetị ahụ, n'aka nke ọzọ, nwere aha ngalaba aha ntanetị n'onwe ya, metụtara onye guzobere, onye nkwado, ndị ọrụ, ndị edemede, isiokwu, ụbọchị ntọala, akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta, ncheta na mpaghara netwọkụ ndị ọzọ. Yabụ, ọbụlagodi na ịnwere ezigbo weebụsaịtị (ngalaba netwọkụ), enwere ike ịgaghị ọkwa ọfụma.
Iji gbochie nke a, ịkwesịrị ịme njikwa SEO zuru oke nke na-elekwasị anya n'akụkụ ọ bụla na ngosipụta nke akara-aka karịa ọdịnala, kama usoro SEO ọdịnala nke na-elekwasị anya naanị na "ngalaba aha", ya bụ, weebụsaịtị . Amara na na ụdị "Mgbakwunye" dabere na azụmaahịa mmekọ, mmekọ Channel YouTube na-emetụta nsonaazụ ọchụchọ ma nyekwuo "mkpa", "obi ike" akara na "ihe". Dị nnọọ ka Google, ihe ndekọ YouTube na-eche ihu, olu, nchọpụta anya na usoro nyocha na nchekwa data ya.
Ikwesiri ichota uzo SEO zuru oke na ihe omuma nke algorithms. Anyị maara site na patent ya abụọ (ọhụụ) yana nkọwa nke ya na Google apụọla kpamkpam na "algorithms dabeere na iwu" gaa na "Deep Learning". Ihe omuma obula banyere Igwe ihe omumu na omumu ihe omumu na-enye aka maka SEO Expert na Data Science na Anya iji kọwaa omume na nhọrọ Google.
Iji gosipụta, gosipụtakwu ọrụ Social Media (Social Press) site na ndị asọmpi gị (ndị asọmpi), mepụta Buzz Factor, rụọ ọrụ dị ka akara, ọ bụghị weebụsaịtị, nọrọ na ebe ịntanetị niile na azụmaahịa gị (ụlọ ọrụ ) Ikwesiri ime nhazi site na iwepu ihe omuma nile di nma na nke ojoo.
Ya mere, ole ọdịnaya ị nwere, ụdị "mpịakọta-omimi" (mpịakọta-omimi) ọ chọrọ, ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke njikọ dị n'ime aha ubi, ọnụ ọgụgụ nke njikọ dị n'ime bet ọ bụla (ibe), ederede arịlịka na a ga-eji ọtụtụ, Ọ ga-ekwe omume ikpebi mmelite ugboro na imewe ụkpụrụ nke ngalaba aha.
Ajụjụ a na-abịakwute ndị chọrọ ịtọ saịtị na nyiwe dịka WordPress na Wix nwere ike ịme na-enweghị koodu.
Maka ndị ga-ewu blọọgụ ma ọ bụ saịtị e-commerce, kedu usoro ị chere ị nwere ngwaọrụ bara uru karịa SEO? Gịnị kpatara nke ahụ?
Nke mbụ, ana m atụ aro ka ị pụọ IdeaSoft, Tsoft, Ticimax na ndị na-eweta usoro E-commerce ọ bụla dị njikere. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịchịkwa (belata) ụlọ ọrụ gị (ihe nhazi), ịgaghị eme ya na ndị na - eweta sistemụ a. Nke a metụtara ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ ndị m kpọrọ aha ha, mana ụlọ ọrụ niile na-ejedebe Soft, Max na aha ndị yiri ya.
Na nke a, ana m ejikwa ọrụ atọ nke ndị ahịa m nke m dị mwute na m ka na-ata ahụhụ ọnụ. N'ebe ndị a na-akwụ ụgwọ, ọbụlagodi ụlọ ọrụ buru ibu na nke mba nwere iwu ijikọ ndị nwe ụdị nyiwe a na ngwụcha ụbọchị ma nwee nnukwu ụgwọ na oge ọghọm. Izute mkpa nke ụdị a site na ịtọ ntọala nke ime na otu ụgwọ (ọnụahịa) kacha daba maka nnukwu mmefu ego.
Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịtọlite ​​obere saịtị e-commerce nke gị, WordPress na WooCommerce ma ọ bụ Shopify ka mma ma daba adaba. Ihe mbu kpatara nka bu adequacy nke ndi mmepe PHP na obodo anyi. Yabụ, ị ga-enwe ohere ịmanye arịrịọ gị pụrụ iche na netwọkụ gị.
Ọzọ uru bụ ọtụtụ na free plugins ha nwere. Wix agaghị ezu oke ma ngwa mgbakwunye dịgasị iche iche na nkwado sọftụwia dị ka ọ nweghị zuru oke. N'otu aka ahụ, Shopify bụ ikpo okwu ebe a na-ere ọbụna mgbakwunye (ngwa) kachasị mfe maka ego ma ọ dị nwute na ọ nweghịdị ike ịchọpụta usoro URL omenala.
Ya mere, ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-enweghị ihe ọmụma sọftụwia WordPress na WooCommerce. Agbanyeghị, isi ndụmọdụ m bụ na ha na-amụta sọftụwia ma hazie ọkachamara na Headless CMS (Untitled Content Management System), ọ bụchaghị na-agbaso ihe atụ na klaasị a. N'oge a, GatsbJS na GraphQL ma ọ bụ Jekyll bụ aro m.
Ọ bụ esemokwu nke ọtụtụ n’ime anyị amaghị banyere ya.
Ọ dị mma iji jupụta saịtị ahụ na ọdịnaya abụọ na mbụ wee gaa n'ihu na ọdịnaya mbụ, ma ọ bụ ịmalite site na ọdịnaya mbụ zuru oke wee gaa n'ihu na ọdịnaya siri ike, n'agbanyeghị na ọ dị arọ? Gịnị kpatara nke ahụ?
Google tinyere ọdịnaya yiri ya na "ụyọkọ". A na-ahọrọ ọdịnaya sitere na isi iyi kachasị ike dị ụyọkọ dị ka "Ntughari". Onye ọ bụla nke yiri ya bụ "Canonacilise" maka Onye Nnọchiteanya. A na-akpọ nke a Njikọ Inversion. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, oyiri ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya yiri ya na-eme ka ọdịnaya ndị nnọchianya nwekwuo ikike. Iji nweta njikọ Njikọ Njikọ, ọ dị mkpa ịbụ Ngalaba Mkpụrụ. Ebumnuche ndị a niile bụ, dị ka ndị mba ọzọ si Turkey, na ndị mba ọzọ n'ezoghị ọnụ. Ya mere, o siri ike "ịsụgharị" ya na Turkish.
N'okpuru, ị ga-ahụ ihe atụ maka nke a.
Ka anyị tụlee ọnọdụ abụọ dị iche iche (akụkọ ifo) n'okpuru.
Ngalaba web-ngalaba izizi bụ ọdịnaya izizi. Ọ chọrọ ọdịnaya 450 na mkpokọta iji nwee ike (ikike) na Isiokwu Contextual. N'ime ọdịnaya 450, achọrọ nkezi nke "10-15" njikọ dị n'ime yana ihe gbasara 20-25 "entities" ma ọ bụ ndị akpọrọ aha. Ọ ga-ewe ogologo oge iji dee nsogbu ndị a niile n'ụzọ akọwapụtara, ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ (oru ngo) gwụchara, aha ngalaba-network agaghị abụ ikike (ike) n'ọhịa ya.
Ugbu a chee echiche oru ngo nke mejupụtara ọdịnaya 450 dị iche iche, otu akwụkwọ na otu ọdịnaya mbụ. Ma ọ bụ, tụlee oru ngo nke na-enweta 450 ọdịnaya dị iche iche site na isi mmalite 10 dị iche iche. Kedu ihe ị ga - eche ma ọ bụrụ na ị bụ Onye Nchọnchọ Nchọgharị (Deverge)? N'adịghị ka nkwenye a ma ama, "ọdịnaya bara uru" dị mkpa maka Google, ọ bụghị ọdịnaya "izizi". Ọtụtụ saịtị akụkọ nwere ike i copyomi ọdịnaya site na ndị asọmpi ha ma sonye na nchọpụta Google. Ọtụtụ ndị ọrụ ojii nwere ike ịgbanwe onye nwe mbụ nke ọdịnaya ahụ na Google, a na-akpọ nke a ọdịnaya Hijacking (Agaghị agwa ya ọzọ).
Ya mere, n'oge "Ahụhụ Canonical" nke Google nwetara mgbe Septemba 2020 wee nwee mmetụta ruo Febụwarị 2021, ọtụtụ weebụsaịtị (web-domains) na GSC Account, URL Inspection Tool, "canonicalized" web-bets si dị iche iche web-ngalaba maka URL nyochara. ”Na-egosi ka mgbọrọgwụ-mbụ na peeji nke.
N'ezie, ajụjụ a na-ewelite ihe ndị a;
Kedụ ka anyị ga - esi merie ihe isi ike nke usoro ndị mbụ? Kedu ụzọ anyị kwesịrị ịgbaso?
M na-agwa ọtụtụ ndị ahịa m, ọ dị nwute, na SEO abụrụla okomoko n'echiche. Nke a bụ n'ihi na SEO gụnyere ihe karịrị ihe Search Engine (Search Engine-Deverge) na-ekwu ma nwee ike ikwu, SEO n’onwe ya na-agbasikwu ike site n’ikewa ya na vetikal dị iche iche.
N'oge gara aga, otu SEO zuru oke maka ọrụ, mana ugbu a enwere ike ịchọ SEO dị iche iche 5 maka ọrụ. Ọ bụ n'ihi na ndị ahịa ọ bụla gụrụ akwụkwọ na Holistic SEO & Digital, ịkekọrịta ozi ebe a na-ebelata ihe egwu na nsogbu nke njikwa ọrụ ma mee ka iguzosi ike n'ihe nye ọrụ ahụ.
N'ebe a, ihe ndị a bụ ihe ị ga-agbakọ tupu ọrụ ọ bụla.
Peeji ole (Bet) ị ga-enwe?
Ole ngalaba (Ngalaba) ị ga-enwe?
Ego ole ka a ga-achọta site na ụdị peeji?
Kedu ihe nrụpụta na ụzọ a ga-eji rụọ ọrụ na ihu ihu?
Ndị ode akwụkwọ na ndị editọ ole ka ị ga-achọ?
Olee otú ọtụtụ njikọ, isiokwu, na ihe netwọk (azụmahịa netwọk) ị ga-mkpa n'oge mbọn usoro?
Ugboro ole njikọ ime ga-adị na ibe ọ bụla?
Kedu maka ihe eji emepụta ihu akwụkwọ, agba agba?
Peeji ole ka ị ga-ebipụta kwa ụbọchị?
Kedu ihe ga-abụ ọnụ ọgụgụ nke ajụjụ gbara na peeji nke ọ bụla?
Ọ bụrụ na ị zaa 10 SEO Project Starter ajụjụ ebe a tupu oge eruo, ị ga - enwezị nkụda mmụọ. Ndị asọmpi gị nwere ike ịnwe ike karịa gị, ha nwere ike ịbụ ndị ama ama, mana nke a apụtaghị na ị gaghị emeri ha. Ọdịdị nke SEO bụ Growth Hacking. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwerịrị mmụọ iji mee ihe ọ bụla iji mee ka ọrụ ahụ too.
Abụ m Koray Tuğberk GÜBÜR, achọrọ m ịkele ndị otu Negerekir.com maka ịkpọtụrụ m. N'ime usoro nke Semantic, ma ọ bụ SEO, Achọrọ m ịsụgharị okwu na ụlọ ọrụ m na Turkish dị ka o kwere mee na ajụjụ ọ bụla m zara. N'oge a, ị nwere ike ịchọpụta ya dị ka ihe iju anya, mana n'ihi mmetụta nke aka m yana eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ọrụ m na-ejikwa bụ ndị mba ọzọ, Turkish m adịla njọ nke ukwuu. Na nke a, achọrọ m inye aka dị ka m nwere ike itinye n'ihi ịdọ aka na ntị ndị m natara n'oge na-adịbeghị anya. Agbanyeghi na asusu bekee adi mba ofesi, anyi choro ichedo asusu anyi ma nwee ike rube isi na mmekorita nke asusu anyi.
Otu n'ime okwu pụrụ iche nke Koray Tuğberk Gübur
Ọ B IFR YOU na ILL chọghị ịchọta ihe ị na-achọ
Ajụjụ ọnụ metụtara
Anyị gbara Ayhan Karaman ajụjụ ọnụ banyere SEO maka gị. Isi;
SEO akwukwo na oru
Akụkọ ịga nke ọma
Ihe ndi Google choro
Ne Gerekir kwadoro izi ezi ya.
Ajụjụ ọnụ nke Münir Türk na Robotics Engineering 🦾
Ajụjụ ọnụ nke Münir Türk, onye nwe ụlọ ọrụ na-arụpụta ọrụ mgbatị robotic. Isi;
Shouldnye ka ọ kwesịrị?
Mmụta na mmemme
Mmepụta nke ụlọ
Isiokwu anyị bụ isiokwu SEO zuru oke. Isi;
Kedu ihe bụ SEO n'ụzọ doro anya?
Kedu ihe dị na usoro SEO?
Koray Tuğberk Gübür Ajụjụ ọnụ
Ajụjụ Ayhan Karaman
Nyocha SEO na-akwụghị ụgwọ
Zel Argül kwadoro izi ezi ya.
Gụọ Tupu abmebe E-Azụmaahịa Site 💵
Edemede anyị nwere ozi gbasara otu esi ahazi saịtị e-commerce n'ụlọ. Isi;
Ne gerekir ndepụta
Mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi
Tụ na ịmepụta ụlọ ọrụ
Virtual pos na ibu
Cameron Moore | Mmmmmmmmmm
11/06/2021 at 14:20 - zaghachi
Hey! Naanị m chọrọ ịjụ ma ị nwere nsogbu ọ bụla na ndị na-agba ọsọ.
Edere m blog m ikpeazụ (WordPress) na m furu efu ọnwa ole na ole nke ịrụsi ọrụ ike n'ihi enweghị nkwado ndabere.
Have nwere usoro ọ bụla iji kwụsị hackers?
Ne Gerekir | Mmmmmmmmmm
11/06/2021 at 21:46 - zaghachi
Ndewo Cameron! Ọ dị m nwute na ị gabigara nke a. M nwere ike iche otú obi dị gị.
Ọ bụrụ na nchekwa esighi ike, nke a bụ okwu na-ehighị ụra. Anyị zutere ọtụtụ ọgụ. Ọ dabara nke ọma na anyị zutere otu enyi nke na-eme ka obi ruo anyị ala mgbe anyị na-amalite. Ọ kpachapụrụ anya maka ọtụtụ mwakpo wee hụ na njikwa ha. Anyị na-arahụ ụra nke ọma. Aga m eme ka ọ mara ka o wee nwee ike ikwu gị ọkachamara. O ga enyere gi aka na obere oge.
Maschera | Mmmmmmmmmm
11/06/2021 at 22:04 - zaghachi
Ndewo Cameron. Nke mbu, a gbagharala m maka ihe ojoo a. Ebe nrụọrụ anyị dabeere na WordPress na-eyi egwu mgbe niile. Maka nke a, anyị ga-akpachapụ anya maka nchekwa tupu ịmalite ọrụ ahụ.
Iji depụta ha:
2- Nchekwa Njikwa
3- HTTP Isi Njikwa
O nwere ihe ndị dị mkpa dị mkpa dị ka
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọzọ na nke a, enwere m ike inye nkwado ndị ọkachamara.
➡️ M na-enye cyber nche ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị.
👨🏻💻 Gbasara m